China ISO9001 Frp Square 15ft 20mm Glass Fiber Tube emepụta na suppliers | Lanbao
Glass fiber tube bụ ìhè ma sie ike, na-abụghị ndị na-eduzi ya, ike dị elu, ike ịka nká, nguzogide okpomọkụ dị elu, nrụrụ corrosion, ya mere na mmanụ ala, ike eletriki, ụlọ ọrụ kemịkalụ, ịkpụcha akwụkwọ, ime mmiri mmiri na mmiri drainage, ịsacha ụlọ ọrụ mmepụta ihe, mmiri mmiri. desalination, gas nnyefe na ndị ọzọ ọrụ e ji ọtụtụ ebe.
Anyị nwere faiba glaasi tube ngwaahịa nke dị iche iche shapes na-anabata customization.
Ngwakọta ndị nwere iko fiber nwere uru nke nnukwu ike na ịdị arọ. Anyị mejupụtara akpa dị na ọkọlọtọ na omenala nha maka pụtara ìhè ike, anwụ ngwa ngwa, ìhè arọ na rigidity.
Faiba glaasi tube bụ ụdị mejupụtara ihe onwunwe na iko eriri na ya ngwaahịa (iko ákwà, teepu, obi, yarn, wdg) dị ka mkwado ihe onwunwe na sịntetik resin dị ka matriks ihe. Echiche nke ihe mejupụtara na-ezo aka na ihe enweghị ike imezu ihe eji eme ihe, ọ dị mkpa ka e mejupụta ihe abụọ ma ọ bụ karịa karịa abụọ, ihe mejupụtara nke ọzọ nwere ike mezuo ihe achọrọ, ya bụ, ihe mejupụtara. Otu iko eriri, ọ bụ ezie na ike dị oke elu, mana n'etiti eriri ndị a na-agbasaghị, nwere ike iburu esemokwu ahụ, enweghị ike iburu ụta, ịkwa osisi na mkpakọ mkpakọ, mana ọ naghị adị mfe ịme ka geometry dị, dị nro. Ọ bụrụ na ịrapara ha na resins sịntetik, ị nwere ike ịme ụdị ngwaahịa ọ bụla siri ike na ụdị nwere ike ịnagide nrụgide ike,
O nwekwara ike iburu ekwe, mkpakọ na ịkwa osisi. Nke a bụ otu iko eriri mesikwuru plastic matriks ọtụtụ ihe mejupụtara.
Ibu ọkụ na ike dị elu - dị mfe ibugharị ma wụnye site na iji ngwaọrụ ọkọlọtọ
Nguzogide Mmetụta - Glassdọ akwara iko na-ekesa ibu iji gbochie mmebi elu
Corrosion na-eguzogide ọgwụ - agaghị adiahade ma ọ bụ ajari, banye kacha nta mmiri mmiri
Nchedo - na-enweghị ntụpọ, na-abụghị amị amị dị
Usoro niile na-aga n'ihu dịka ISO 9001
Mbupu ngwa ngwa, oge mbu
Aha ngwaahịa Fibergalsss tube
Ihe onwunwe Glass fiber Rolling resins
Elu Ezigbo, Matte imecha, High gloss imecha
Agba Red, Black, White, Yellow ma ọ bụ Omenala
Ogologo 10ft 15ft 18ft 25ft 30ft 35ft 40ft 45ft 50ft 55ft 60ft 70ft 72ft
Nha 20mm-200mm, ma ọ bụ Omenala
Ngwa 1. Ọdụ eletriki na eletrọniki
2. Ogwe USB, radome, ubu mkpuchi, wdg.
3. Chemical mgbochi corrosion ahịa
4. Grating n'ala, handrail, ọrụ n'elu ikpo okwu, n'okpuruala mgbali ọjà, steepụ, wdg
5. constructionlọ ewu ụlọ
6. Oghere windo, windo windo na akụrụngwa ya, wdg.
7. Lampposts, mmiri ọgwụgwọ, brackets megide nnukwu ulo oru jụrụ ụlọ elu, wdg
Ibu ọkụ na ike dị elu
Corrosion na-eguzogide ọgwụ na mgbochi ịka nká
Okpomọkụ na ụda olu soundgba ume dị elu
Low njupụta na elu Kwụ Ọtọ
Mmetụta na-eguzogide nrụgide UV na-eguzogide ọgwụ
Mgbochi na Mmetụta Mgbu
Ọrụ Ichapu CNC dịka eserese CAD gị
Bipute dika faịlụ AI
Anyị ngwaahịa Carbon eriri tube, carbon eriri efere, carbon eriri profaịlụ
.Dị OEM / ODM
Ngwa faiba glaasi dịkwa iche na ngwaahịa ngwaahịa ọdịnala, na arụmọrụ, ojiji, njirimara ndụ dị mma karịa ngwaahịa ọdịnala. Ya mfe ịme ngosi uwe, nwere ike ahaziri, agba na uche nkenye ọnọdụ nke e ji mara, site na-ere ahịa na-ere ákwà na ihu ọma, ogide ọzọ na ndị ọzọ na nnukwu ahịa akara.
Nke gara aga: ISO 26mm 30mm 50mm 100mm 3k faiba glaasi tube
Osote: Isiike Lightweight Telescoping faiba glaasi tubing
25mm Carbon eriri tube
Gburugburu Carbon Fiber tube
Mbadamba Carbon Fọd
Anabata ogologo nghazi, faiba glaasi Rou ...
1K 3K 12K epoxy asọfe faiba glaasi Now tube
ISO 26mm 30mm 50mm 100mm 3k faiba glaasi tube
Isiike Lightweight Telescoping faiba glaasi tubing